May 2017 – Ministry of Education in Puntland
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo safar shaqo u aaday dalka Ethiopia.
28/05/2017- Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Prof: Abshir Yuusuf Aw ciise ayaa maanta safar shaqo ugu dhoofay dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Adis ababa. Wasiirka waxbarashada oo […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland oo soo afmeertay imtixaankii shahaadiga ah 2017.
25/May/ 2017- Waxaa soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland waxaan hambalyo u diraynaa dhammaan ardaydii ka qaybgashay, Agaasimaha Waaxda Taya-dhawrka Manahijta iyo Kormeerka […]
Daawo photo News imtixamadkii Dugsiyada sare oo galay Maalintii 5aad.
24/may/ 2017- Dhamaan Gobolada puntland waxaa si habsimi socod leh uga socda maalintii 5aad imtixaankii Dugsiyada sare. Daawo photo News imtixamadkii Dugsiyada sare oo galay Maalintii 5aad. Dugsiga sare Al […]
23/may/2017- Imtixaanadkii Fasalka 8aad ee Dugsiyadda Dhaxe ee Puntland oo maanta si habsami ah u soo gababoobay , dhaaman Gobolada Puntland waxa ka soo afjarmay imtixaankii fasalka 8aad oo si […]
Wasiir ku xigeenka Wasaradda Waxbarashadda Iyo Tacliinta Sare Ee Puntland Oo Daahfurtay Imtixaanka Shahaadiga Ah ee Magalada Boosaso
Wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare oo sagootisay Agaasme Waaxeed-yo iyo Madax qaybeed koormere iyo gudoomiye Waxbarashada degmo oo shaqada ka fariistay